ဝက်သား တောက်တောက်ကြော် | Wutyee Food House
Tandoori ကြက်သားကင် »
February 25, 2012 by chowutyee ၀က်သား တောက်တောက်ကြော် တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တိုင်း လိုလိုမှာ မှာယူစားသာက်နိုင်သော ၀က်သား တောက်တောက်ကြော်ကို အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် ချက်စားကြည့်ကြရအောင်။
၀က်သားပြားတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
၁။ ၀က်သား (အဆီမပါ) – ၂၀ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်စင်းပါ)
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၃ခု (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၃။ ဘဲဥ – ၁လုံး (ခလောက်ပါ)
၄။ ပဲငံပြာရည်(အနောက်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ကော်မှန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၇။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၈။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ ၁ပုံ
၁။ ၀က်သားပြားတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်း (၀က်သား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဘဲဥ၊ ကော်မှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ သကြား) အားလုံးကို သမအောင် ရောနုယ်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ၀က်သားကို ၁လက်မအရွယ် အလုံးလေးများ ရခု လုပ်လိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်၍ ၀က်သားပြားများကို နီညှိရောင်သန်းလာသည်အထိ ထည့်ကြော်ပေးပါ။
၄။ ပြီးနောက် ၀က်သားပြားကြော်များကို ဇကာဖြင့် ဆယ်ပြီး ဆီပြန်စစ်ထားပေးပါ။
၁။ မုန်လာဥနီ – ၂ခု(အ၀ိုင်းလှီးပါ)
၂။ ဘိုစားပဲ – ၇ခု (အရှည် အစောင်းလှီးပါ)
၃။ ရွှေပဲ – ၁၅ခု (တ၀က်ဝက်ပါ)
၄။ ပန်းပွင့် – တစိတ် (အတုံးလေးများ တုံးပါ)
၇။ ပဲငံပြာရည်(အနောက်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၈။ ကော်မှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၉။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၁ခု (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၁၀။ ကြက်ဥ (အကာ) – ၁လုံး (ခလောက်ထားပါ)
၁။ မုန်လာဥနီ၊ ရွှေပဲ၊ ဘိုစားပဲ၊ ပန်းပွင့် ကို ရေနွေးဖြင့် ၂မိနစ်ခန့် ဖျော်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ရေခဲရေပြန်စိမ်ပေးပါ။
၁။ ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူထည့် အညှိရောင်သန်းလာသည် အထိ ဆီသပ်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် မုန်လာဥနီ၊ ဘိုစားပဲ၊ ရွှေပဲ၊ ပန်းပွင့် များကို ထည့်ကြော်ပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည် ကိုထည့်ပြီး ၃မိနစ်ခန့် မွှေပေးပါ။
၄။ ပြီးနောက် ဟင်းရွက်ပြုတ်ရည် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး ၅လုံးထည့်ပေးပါ။
၅။အရွက်များ နူသွားလျှင် ကြော်ထားသော ၀က်သားများကို ထည့်ပြီ မွှေလိုက်ပါ။
၅။ ဆော့ရည် ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ကော်မှုန့်ကို ရေဖြင့်ဖျော်ပြီး ထည့်ပေးပါ။
၆။ ပြီလျှင် ခလောက်ထားသော ဘဲဥအကာကို ထည့်၍ နာနာမွှေပေးပါ။
၇။ တရုတ်စတိုင် ၀က်သားတောက်တောက်ကြော်ကို ထမင်းပူပူလေးနဲ့ တွဲစားကြရအောင်…
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 31 Comments	31 Responses
on February 18, 2010 at 3:03 pm | Reply Trader begger
looks very nice, sister.
on February 18, 2010 at 3:04 pm | Reply chowutyee
Thank big bro.. hee…
on February 18, 2010 at 3:13 pm | Reply Hmone Gyi
wow look so professional and looking nice and wanna eat…will really try this one..i have pork at home heee
on February 18, 2010 at 3:15 pm | Reply chowutyee
ဟားဟား ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်လုပ်စားပြီးရင် feedback ပြန်ပေးနော်..း)
on February 18, 2010 at 3:34 pm | Reply Pwa
Hi, looks very nice. i’ll definitely try and let you know. thanks.
on February 18, 2010 at 4:55 pm | Reply chowutyee
Thanks you too!! pls try it , it is really nice one…
on February 18, 2010 at 3:55 pm | Reply Evy
Deli…cious….Thanks for sharing. I m going to replace pork with chicken and try it out soon.
on February 18, 2010 at 4:56 pm | Reply chowutyee
၀တ်ရည်တော့ တခါမှ ကြက်သားနဲ့ စမ်းမချက်ရသေးဘူး.. ကြက်သားတောက်တောက်ကြော် လည်း စားကောင်းမှာပဲ.. ဒီလို idea ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးပဲနော်..
on February 18, 2010 at 5:28 pm | Reply Hmone Gyi
i prefer pork than chicken..chicken also nice…some times..i tried with chicken liver..it taste nice too
on February 19, 2010 at 3:38 am | Reply chowutyee
ကိုယ်ချက်ပြီးပြီးလား.. ဒီနေ့ညချက်မယ်ဆိုး)
on February 19, 2010 at 9:41 am Hmone Gyi
i cooked but only with other vegetable b/c i was lazy to go supermarket to buy….it taste really nice😉 very delicious hee😉
on February 19, 2010 at 11:01 am | Reply chowutyee
တော်လိုက်တဲ့ ငါ့အမွှာလေးပါလား.. ဟဲဟဲ good job🙂
on February 21, 2010 at 9:28 pm | Reply Pwa
I have tried last week and it turned very good. thanks for sharing the recipe.
on February 22, 2010 at 6:23 am | Reply chowutyee
Heee .. ဟုတ်တယ် ၀တ်ရည်လည်း ၀က်သားတောက်တောက်ကြော်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်.. ခုလိုချက်လို့လည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..း)
on May 6, 2010 at 3:35 pm | Reply pyayko
ကဲ ဝတ်ရည်.. လုပ်စားလိုက်ပြီဟေ.. ကောင်းတယ်ဗျာ့… ကြော်နေတုန်း တရုတ်မဆာလာလေးထဲ့… ဟင်းရွက်ကြော်ကို အသားနဲ့ပြန်ရောပြီး ငြုပ်ကောင်းမှုန့်လေးထဲ့လိုက်တယ်… ပူပူလေးဆိုတော့ မွှေးနေတာပဲ.. ပြန်တောင်စားချင်လာပြီး …. 😛
on May 7, 2010 at 6:03 am | Reply chowutyee
ကိုပြေကိုလုပ်တာနဲ့ ၀တ်ရည်တောင် ပြန်စားချင်လာပြီး… ငရုတ်ကောင်းနံ့က ဒီကတောင် ရတယ်၊ မွှေးနေတာပဲ..😉
on October 27, 2010 at 7:47 am | Reply moe
I wil try to cook this recipes for dinner .I have tried sweet and sour fried chicken ,it is new recipes for me they said that very good .thanks alot
on October 27, 2010 at 8:36 am | Reply moe
I would like to know chinese pepper is5powder ? I will try to cook it, and pyayko’s recommed with chinese pepper ….may be more nice .thanks for sharing .
on November 4, 2010 at 1:52 am | Reply chowutyee
Moe ရေ chinese pepper က Five Spice Powder နဲ့ မတူပါဘူး။ Chinese Five Spice Powder က supermarket တွေမှာ လွယ်တကူကူ ၀ယ်ယူလို့ရပါတယ်.. Thanks now..🙂
on February 26, 2012 at 4:39 pm | Reply ခင်ယမုံ
အစ်မက ဝက်သားကိုသပ်သပ်မကြော်ပဲ အရွက်ကြော်ထဲဒီအတိုင်းထည့်ပြီး ကြော်စားတာများတယ်..
on March 7, 2012 at 3:42 pm | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပါ မခင်ယမုံ လုပ်စားကြည့်ပါနော်..😛
on February 27, 2012 at 3:21 am | Reply နေသွန်းပြည့်စုံ
မမ ၀တ်ရည်ရေ….ညီမလေး ကတော့ အိမ်သားများတော့ ၀က်သားတောက်တောက် ကြော် ဖို. ခပ်သေးသေး လုပ်ပြီး….ကော်ရည် စီးစီး လေး နဲ. အရွက်ကြော်ရောင်စုံ လေး နဲ. ကြော်စားမယ်.
on March 7, 2012 at 3:44 pm | Reply chowutyee
Plz try ma yay..🙂
on March 20, 2012 at 9:50 am | Reply khin thandar
Sis How to call ဘိုစားပဲ and ရွှေပဲ in English ? because I don’t know that.
on March 21, 2012 at 8:02 am | Reply chowutyee
ဘိုစားပဲ = French bean. ရွှေပဲ = green peas ပါ..🙂
on March 26, 2012 at 3:53 pm | Reply winnie
sis,what does it mean by “hinn ywet pyote yay”? How can I get it?
on March 28, 2012 at 3:44 pm | Reply chowutyee
မုန့်လာဥနီ၊ ဘိုစားပဲတို့ကို ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကို ပြောတာပါ။
on April 1, 2012 at 1:13 pm | Reply winnie
thanks sis.I will try it🙂
on April 3, 2012 at 3:52 pm | Reply chowutyee
Plz try it!😛
on April 5, 2012 at 1:16 am | Reply Mia
sis, 20 kyet thar is how many kg or pound?
on May 10, 2012 at 2:54 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] February 25, 2012 ၀က်သား တောက်တောက်ကြော် […]